Cascina, Toscana, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Mirela
Kuthiwani ngefulethi? Muhle, kodwa ake sithi kuwe... Asiqale, uzofika endaweni yokupaka enkulu phambi kwendlu, ukufaka amapotimende akho ngaphakathi kuyizinyathelo ezimbalwa nje, uzongena e-avenue lapho ungashiya khona izingane ukudlala buthule, uzoya izitebhisi zangaphandle ukukuthola ku ithala omkhulu nge ithala
4.98 ·301 okushiwo abanye
4.98 · 301 okushiwo abanye
kuthiwani ngendawo ezungezile? Sine-Pisa imizuzu eyi-10 ukusuka kithi, uzobe uzwile nge-cathedral ene-leaning tower edumile iyingxenye ye-Unesco futhi ingenye yezimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba, sincoma ukuthi uye lapho noma sekumnyama, nezibani zayo. kuhle ... Cascina kuyinto enhle kakhulu edolobheni elincane ephakathi, itholakala cishe imizuzu engu-15 kithi, siba kakhulu eduze nathi Certosa di Calci, okuyinto has a Museum okumangalisa ngempela of Natural History wase-University of Pisa ngaphakathi. .. bese sezindiza, iziteshi ojantshi, ibhasi inethiwekhi ezinhle, isibhedlela kakhulu useduze nathi nokuthi ekugcineni esinalo zokudla eziningi, ezinkantini kanye izivakashi emzini ... Pisa uyakhile port izivakashi eminyakeni embalwa edlule lapho kungaba ukuchitha izinsuku amahle nezingane. ..
NginguMirella, ngathuthela phakathi kwePisa neCascina ngo-2013 ngoba ngathandana nendoda eyazalelwa ePisa futhi ehlala lapha impilo yayo yonke, wangenza ngathola leli dolobha elihle kanye neCascina, idolobhana lobuciko, bashada futhi sanquma ukuqasha indlu ..... Siyakuthanda ukwenza izivakashi zethu ngizizwe ngikhululekile njengoba they were ekhaya ... mina nomyeni wami uthando yobuciko ezintabeni, lapho in the sakamuva sizama ukuhamba khona lapho kungenzeka, thina ukuxhumana green kufana lingatshajwa amabhethri ....
NginguMirella, ngathuthela phakathi kwePisa neCascina ngo-2013 ngoba ngathandana nendoda eyazalelwa ePisa futhi ehlala lapha impilo yayo yonke, wangenza ngathola leli dolobha elihl…
UMirela Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 1827
Hlola ezinye izinketho ezise- Cascina namaphethelo